Ogaden News Agency (ONA) – Tacadiyo Kala Duwan oo Ogadenia Kadhacay + Faahfaahin.
Tacadiyo Kala Duwan oo Ogadenia Kadhacay + Faahfaahin.
Posted by Dulmane	/ August 6, 2017
Wararka naga soo gaadhaya wadanka lagumaysto ee Ogadenia ayaa sheegaya tacadiyo kala duwan oo ciidanka wayaanuhu ay ugaysteen dad shacab ah oo kudhaqan meelo kala duwan oo wadanka Ogadenia kamid ah.
Warkan oo aan kahelay xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa kawarbixinaya jidh-dil iyo xidhay baahsan oo ciidamada bahalka ah ee wayaanuhu ay ugaysteen dad shacab ah oo ree Ogadenia ah waxayna udhaceen sidan.
Warku waxa uu sheegayaa in markay taariikhdu ahayd 1/8/17 deegaanka lagu magacaabo Meermeersane oo Dagmada Awaare ee Gobolka Jarar katirsan waxay ciidanka wayaanuhu ku xidheen dadka kala ah
1 xaliimo xaaji axmed
2 axmed xassan maxamed
3 sahra oo magaceeda oo buuxa aanaan haynin.
Waxaa kale oo markay taariikhdu ku beegnayd 2/8/17 Dagmada Dhagaxbuur waxay ciidanka wayaanuhu ku xidh xidheen dadka kala ah
1 maxamed maxamuud
2 xaliimo sheekh cabdulaahi
3 cabdi xassan cali
4 diib oo magaceeda oo buuxa aanaan helin.
Isla taariikhdan 2/8/17 ayaa meesha loo yaqaano Bukudhaba oo Dagmada Awaare katirsan waxay ciidanka gumaysigu ku xidh xidheen 14 qof oo ay kakoobnaayeen qayska ree Cabdi Xassan waxaana sidoo kale qayskaas laga dhacay geel iyo adhi badan. Sidoo kale 2/8/17 Dagmada Dhuxun Ee Gobolka Nogob waxaa xidhay iyo jidh dil laysugu daray dadka kala ah
1 cabdiwali maxamed cabdulaahi
2 maxabo maxame cabdulaahi.
Dhinaca kale 3/8/17 deegaanka Ceelxaar oo Gobolka Jarar Katirsan waxay ciidanka gumaysigu dadka shacabka ah ku ganaaxeen lacag dhan 100000 oo bir, lacagtaas oo ah gibir ay doonayaan in deegaanka laga qaado. Amarka kasoo baxay ciidanka wayaanaha waxaa diiday odayaashii deegaanka oo sheegay in ay kujiraan abaar iyo dhibaatooyin kale oo rabaani ah iyo kuwo dadkeeneenba waxayna odayaashu sheegeen in aysan bixin karin lacagtaas.
Ciidanka wayaanaha ee halkaas kusugnaa kuxidh xidhay qaar kamid ah odayaasha deegaanka oo uu kamid yahay odaygii hadalka jeediyay oo lagu magacaabo Maxamuud Dheeg Daahir.